ထားစရာမရှိအောင်ဖြစ်နေတဲ့ ငွေတွေကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲလို့ စဉ်းစားနေတာလား???
ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ပိုက်ဆံတွေကို စနစ်တကျသုံးစွဲပြီး ချိုးချံခြွေတာ လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကလည်း ကိုယ်သေရင်ကိုယ့်နောက်ပါမှာမှ မဟုတ်ပဲ။ ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာပြီး မသုံးလိုက်ရ ဘူးဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ပိုက်ဆံတွေလည်း အများကြီးရှိတယ် ဘယ်မှာသုံးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတဲ့ ဘောစိတွေအတွက်…။
ကိုယ်ရှာသလောက် စည်းစိမ်တွေတိုင်းက ကိုယ်သေသွားရင် ယူသွားလို့လည်း မရပါဘူး။ ယူသွားလို့ ရတာက ကုသိုလ်တွေပါ။ ဒါကြောင့် အလှူအတန်းများများလုပ်ပါ။ မရှိတဲ့သူတွေကို ထောက်ပံ့ပေးပါ။ သင်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေက သင့်အတွက် ဘယ်လောက်မှမများဘူးဆိုပေမယ့် မရှိတဲ့သူတွေအတွက် တော့ အများကြီး အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူမရောက်နိုင်တဲ့နေရာကို သေချာစုံစမ်းပြီး သွားရောက်ထောက်ပံပေးပါ။ သင်ကြည်နူးခြင်းကို ခံစားရမှာပါ။
၂. အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ ရှာဖွေပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့သင်မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ပါ။ မစီးဖူးတဲ့ကားသစ်တွေ ဝယ်စီးပါ။ လုပ်ငန်းသစ်တွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေ ဒီလိုမျိုး သင့်အတွက် အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ခံစားမှုအသစ်တွေ ပေးနိုင်မယ့် အရာတွေမှာ သင့်ပိုက်ဆံကို အသုံးပြုပါ။ ဖြုန်းတီးရာ မရောက်သလို သင်လည်း အတွေ့အကြုံသစ်တွေ အများကြီးကိုလည်း သင်ခံစားရပါတယ်။
Recommmended for you - မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေအတွက် မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ လက်လျှော့လိုက်ပြီလား
၃. ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါ။
ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာ ကျန်းမာရေးသာ မကောင်းဘူးဆိုရင် ရှာထားသမျှအကုန်လုံးက ဆေးဖိုးနဲ့ပဲ ကုန်တော့မှာပေ့ါ။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဆေးရုံ ကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် Medical Check Up လုပ်ဖို့အတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချ လာရပါတယ်။ ၆ လ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၄. စိတ်ထဲကအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ ဘာလုပ်ပါလို့ မညွှန်းတော့ပါဘူး။ လူတိုင်း လူတိုင်း ငယ်ငယ်တည်းက လုပ်ချင်တဲ့အရာ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတော့ ရှိမှာပါ။ အခြေအနေမပေးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်မပေးနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားခဲ့ရတာမျိုး ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုချိန်က အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အကောင်းဆုံး ပါပဲ။ တချို့က အိမ်အလှဆင်ရတာကို ကြိုက်တယ် ခမ်းနားတဲ့အိမ်ကြီးတွေကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် အခုသင့်အိမ်ကို စိတ်တိုင်းကျ အလှဆင်လိုက်ပါ။ တချို့က တကယ့်ကို ဖက်ရှင်ကျတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို နှစ်သက်တတ်တယ် ဒါဆိုရင် ခုပဲ shopping ထွက်လိုက်ပါတော့။ ငွေကြေးအတွက်လည်း စိတ်ပူစရာမလိုတော့တဲ့အတွက် သင်စိတ်ကူးအတိုင်းလိုက်ပါ ခံစားကြည့်ပါ။
သင်တန်းတွေကို အချိန်ကုန်မခံပဲ အိမ်မှာပဲ အေးအေးဆေးဆေးတစ်ယောက်တည်း သင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ sayar.com.mm မှာ စုံစမ်းလိုက်ပါ။
ခမျြးသာလာတယျဆိုတာကလညျး ကိုယျ့ပိုကျဆံတှကေို စနဈတကသြုံးစှဲပွီး ခြိုးခြံခွှတော လို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ပစ်စညျးဥစ်စာဆိုတာကလညျး ကိုယျသရေငျကိုယျ့နောကျပါမှာမှ မဟုတျပဲ။ ပငျပငျပနျးပနျးရှာပွီး မသုံးလိုကျရ ဘူးဆိုရငျတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ပိုကျဆံတှလေညျး အမြားကွီးရှိတယျ ဘယျမှာသုံးရငျကောငျးမလဲ စဉျးစားနတေဲ့ ဘောစိတှအေတှကျ…။
ကိုယျရှာသလောကျ စညျးစိမျတှတေိုငျးက ကိုယျသသှေားရငျ ယူသှားလို့လညျး မရပါဘူး။ ယူသှားလို့ ရတာက ကုသိုလျတှပေါ။ ဒါကွောငျ့ အလှူအတနျးမြားမြားလုပျပါ။ မရှိတဲ့သူတှကေို ထောကျပံ့ပေးပါ။ သငျထောကျပံ့ပေးလိုကျရတဲ့ငှကေ သငျ့အတှကျ ဘယျလောကျမှမမြားဘူးဆိုပမေယျ့ မရှိတဲ့သူတှအေတှကျ တော့ အမြားကွီး အထောကျအပံ့ဖွဈပါတယျ။ လှယျလှယျကူကူမရောကျနိုငျတဲ့နရောကို သခြောစုံစမျးပွီး သှားရောကျထောကျပံပေးပါ။ သငျကွညျနူးခွငျးကို ခံစားရမှာပါ။
၂. အတှအေ့ကွုံအသဈတှေ ရှာဖှပေါ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ ရှိတဲ့သငျမရောကျဖူးတဲ့နရောတှကေို သှားရောကျလညျပတျပါ။ မစီးဖူးတဲ့ကားသဈတှေ ဝယျစီးပါ။ လုပျငနျးသဈတှမှော ရငျးနှီးမွှုပျနှံတာတှေ ဒီလိုမြိုး သငျ့အတှကျ အတှအေ့ကွုံသဈတှေ ခံစားမှုအသဈတှေ ပေးနိုငျမယျ့ အရာတှမှော သငျ့ပိုကျဆံကို အသုံးပွုပါ။ ဖွုနျးတီးရာ မရောကျသလို သငျလညျး အတှအေ့ကွုံသဈတှေ အမြားကွီးကိုလညျး သငျခံစားရပါတယျ။
Recommmended for you - မဖွဈသေးတဲ့အရာတှအေတှကျ မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူးလို့ လကျလြှော့လိုကျပွီလား
၃. ကနျြးမာရေးကိုလညျး ဂရုစိုကျပါ။
ပိုကျဆံ ဘယျလောကျခမျြးသာခမျြးသာ ကနျြးမာရေးသာ မကောငျးဘူးဆိုရငျ ရှာထားသမြှအကုနျလုံးက ဆေးဖိုးနဲ့ပဲ ကုနျတော့မှာပေ့ါ။ ဒါကွောငျ့ ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျပါ။ အခုဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ဆေးရုံ ကောငျးတှအေမြားကွီးရှိတဲ့အတှကျ Medical Check Up လုပျဖို့အတှကျ ပိုပွီးအဆငျပွပွေီး ယုံကွညျစိတျခြ လာရပါတယျ။ ၆ လ တဈကွိမျလောကျတော့ လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
၄. စိတျထဲကအတိုငျး ဆောငျရှကျပါ။
နောကျဆုံးတဈခကျြအနနေဲ့တော့ ဘာလုပျပါလို့ မညှနျးတော့ပါဘူး။ လူတိုငျး လူတိုငျး ငယျငယျတညျးက လုပျခငျြတဲ့အရာ ဖွဈခငျြတဲ့ဆန်ဒတဈခုတော့ ရှိမှာပါ။ အခွအေနမေပေးလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ အခြိနျမပေးနိုငျလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ စိတျထဲမှာပဲ သိမျးထားခဲ့ရတာမြိုး ရှိခဲ့မယျဆိုရငျ အခုခြိနျက အကောငျအထညျဖျောဖို့ အကောငျးဆုံး ပါပဲ။ တခြို့က အိမျအလှဆငျရတာကို ကွိုကျတယျ ခမျးနားတဲ့အိမျကွီးတှကေို သဘောကတြယျဆိုရငျ အခုသငျ့အိမျကို စိတျတိုငျးကြ အလှဆငျလိုကျပါ။ တခြို့က တကယျ့ကို ဖကျရှငျကတြဲ့ အဝတျအစားတှကေို နှဈသကျတတျတယျ ဒါဆိုရငျ ခုပဲ shopping ထှကျလိုကျပါတော့။ ငှကွေေးအတှကျလညျး စိတျပူစရာမလိုတော့တဲ့အတှကျ သငျစိတျကူးအတိုငျးလိုကျပါ ခံစားကွညျ့ပါ။
သငျတနျးတှကေို အခြိနျကုနျမခံပဲ အိမျမှာပဲ အေးအေးဆေးဆေးတဈယောကျတညျး သငျခငျြတယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ sayar.com.mm မှာ စုံစမျးလိုကျပါ။
ကော်ဖီသောက်တဲ့သူတွေ ဘာကြောင့် ပိုပြီး အောင်မြင်ကြသလဲ
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရုံးပိတ်ရက်ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ
နှစ်စဉ်ပညာသင်ဆု ($7000 မှ 10000)အထိပေးအပ်သည့် Drew Univesity
Yin Nyein Nge